अब 45 वर्षबाट बृद्धभत्ता : सहि कि गलत? – List Khabar
Home / समाचार / अब 45 वर्षबाट बृद्धभत्ता : सहि कि गलत?
admin November 28, 2021 समाचार Leaveacomment 205 Views
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीपछिरिङ लामाले ६५ वर्षबाट बृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको सून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । ‘ जेष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने ।
उमेर ६५ वर्ष कायम गर्नुपर्यो । हामीहरु यहाँ ( शहर ) बसेको को त उपचार गर्न सक्दैनौं । पहाडमा बस्नेले उपचार कसरी पाउँछ ? ।
त्यसकारण ६५ वर्षबाट बृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्नपर्यो ‘ सांसद लामाले भने । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीपछिरिङ लामाले ६५ वर्षबाट बृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको सून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । ‘ जेष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने ।काठमाडौँ : काठमाण्डौसहित देशभरको वायु प्रदूषण फेरि बढेको छ । घाम लागेसँगै केही दिन वायु प्रदूषण घटेको भए पनि अहिले देशका धेरैजसो प्रदूषण मापन केन्द्रहरूले प्रदूषण बढेको देखाएका छन् ।
पिएम २.५ को मात्रा प्रतिघण्टा हेर्दा पोखरामा १८४, विराटनगरमा १७६, काठमाडौंको रत्नपार्कमा १५१, कीर्तिपुरमा १५६, सिमरामा १५४ पुगेको छ । धनकुटा, धनगढी, महेन्द्रनगरमा पनि प्रदूषण बढिरहेको छ । ती सहरको वायु गुणस्तरको मात्रा राष्टिय मापदण्डभन्दा बढी रहे पनि रेड जोनमा परिसकेका छैनन्
Previous के तपाई पत्याउनु हुन्छ ? एउटा बाख्रो २५ लाखमा बिक्यो, के छ यसमा खास विशेषता ?
Next यी युवक जसले गरे खतरनाक यात्रा , विमानको ल्यान्डिङ गियरमा लुकेर पुगे अमेरिका, भयो दुर्लभ घटना !